Tetikasa Tafita Hampiroboroboana ny tontolon’ny fampianarana
Notanterahina omaly alarobia 31 jolay tetsy amin’ny Hotely Mandrosoa Ivato ny fivoriana fahenina nataon’ireo komity maharitry ny tetikasa Tantsoroka ho an’ny Fitantanana ny sekoly (TaFita).
Tetikasa tohanan’ny governemanta Japoney (JICA) hanatsarana ny fampidirana sy ny fitazonana maharitra ny ankizy any an-tsekoly. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana sy ny kalitaon’ny fampianarana izay hanohanana ny minisitera amin’ny drafitra fampivoarana ny fampianarana (PSE). Zavatra 3 lehibe no hanohanana ny minisitera ka anisan’izany ny fampiroboroboana ny fitantanana ny sekoly, ny fanatsarana ny kalitao sy ny fanamafisana ny famakiam-boky sy ny taranja matematika ary ny fanomezana sakafo any an-tsekoly. Efa nanomboka tamin’ny jona 2016 ity tetikasa ity ary ho tapitra ny taona 2020 ka ny faritra Analamanga sy Amoron’i Mania no iasana. 2600 ny sekoly fanabeazana fototra ary mpianatra miisa 410 000 no hahazo tombony amin’ity tetikasa ity.